वसन्तपुरको चिया पसल
पढाइ र होम सिकनेसले मन व्याकुल थियो । प्लस टु सकेका साथीहरू काठमाडौंमै भए पनि सम्पर्कभन्दा बाहिर । सम्पर्कमै भएकाहरू पनि आआफ्नो उद्देश्यमा लागिपरेका थिए । यस्तो लाग्यो, म मात्रै खाली छु । फुस्रो कपाल, कानमा सेतो इअरफोन, मुखमा मास्क र कालो लेदरको ज्याकेट लगाएर सोह्रखुट्टे हुँदै वसन्तपुरतिर लागेँ । ।आकाशमा कालो बादल मडारिँदै पूरै उपत्यकालाई ढाकेको थियो । बाहिर निक्लने मान्छेहरू पानी पर्ने अनुमानका साथ छाता लिएर निक्लने गर्थे । मेलम्चीको पानी आउने कुरा भएकाले बाटोमा पाइप बिछ्याउने कामलाई तीव्रता दिइएको थियो । पानी नभएको सहरमा मानिस छाता बोकेर हिँड्नुपर्ने अनौठो दृश्य थियो । ती मानिस हतारमा थिए । एकअर्कालाई हेर्ने फुर्सद समेत थिएन ।केही समयमै म वसन्तपुर पुगेँ र सधैं जाने गरेको बिगबेल नामक क्याफेमै गएँ । अरुबेला म आउँदा सधैं साथीहरू हुन्थे तर आज एक्लो थिएँ, नितान्त एक्लो । क्याफे खचाखच थियो । एउटा कुनाको टेबल रोज्न बाध्य भएँ । हुन पनि मलाई भीडभाड मन पर्न छोडिसकेको थियो । मलाई मानिसहरूको हुल तुच्छ लाग्थ्यो, क्षणिक लाग्थ्यो । सायद कसैसँग आशा गरेअनुरूप सम्बन्ध कायम नभएकोले होला । टेबलमा बसेको केही बेरमै सानो भाइ आएर सोध्न लाग्यो, “दाइ के लिनु हुन्छ ?”मिल्क टी, मैले अर्डर दिएँ ।मिल्क टी मात्र हो दाइ ?”अँ भाइ, मिल्क टी मात्रै ल्याऊ अहिले । मैले मलिन आवाजमा उत्तर दिएँ ।केही बेरमै चिया आइपुग्यो । म चिया पिउँदै मोबाइलमा फेसबुक चलाउँदै थिए । दुई तिहाइ सरकारले ल्याएका विधेयकहरू धमाधम विवादित भएका खबर फेसबुकमा पनि चर्चाको विषय रहेछन् । केही त विधेयक कुन चरीको नाम हो र त्यसले के गर्छ भन्ने थाहा नपाउने किशोरहरू पनि सरकारको विरोध गरिरहेका देखिन्थे ।फेसबुककको रमाइलो के हो भने यहाँ राजनीति नबुझेकाहरूले पनि राजनीति गर्छन् ।चुरोटको धुँवाको गन्धले नाकलाई सचेत बनाएपछि मैले मोबाइलबाट टाउको उठाएँ । छेउको टेबलमा एकजना युवती चुरोट पिउदै थिई । अवसादले ग्रसित, ऊ बुइँगलतिर हेरेर कफी पिइरहेकी थिई । गर्मी र कफि नजरी एकअर्कामा मिल्दैनन्, त्यस्तै उनको सौन्दर्यमा चुरोटसँगै पोखिएका पीडा मिल्ने देखिएन ।ध्यान दिएर हेरेँ । कताकता देखे जस्तो लाग्थ्यो तर ठ्याक्कै याद आइरहेको थिएन । ऊ बारम्बार चुरोट मात्रै पिउँथी र आफ्नो पीडालाई चुरोटको धुवाँमार्फत लामो सासले बाहिर फ्याँक्थी ।मैले कतै देखेको हुनुपर्छ तर कहाँ भनेर घोत्लिँदै थिएँ, उसको कुर्सी बज्यो । मैले उसतिर आँखा लगाएँ । कफी पिइसकेर उठ्ने तरखरमा कुर्सी बजेको रहेछ । म सतर्क भएँ । सायद उसलाई हेर्न नखोजेर बढी हेरिरहेको थिएँ । उसले चाल पाइहाली ।बाहिर निक्लँदै गर्दा मेरो टेबलनजिकै आई र क्रस गर्नुअघि भनी, ‘हाई’मैले थाहै नपाई मेरो मुखले भन्यो, ‘हेल्लो’ ।‘हजुर पनि आउँनुहँुदो रहेछ त यता ।’‘अँ, मलाई यहाँको चिया मन्न पर्छ ।’यति कुरा गर्दा पनि मैले उसलाई चिन्न सकिरहेको थिइन ।‘मलाई अलि हतार छ, जान्छु है’ भन्दै ऊ बाहिरतिर लागी ।मलाई प्रसस्त फुर्सद थियो । र, यो फुर्सदमा सोच्ने सामग्री दिएर ऊ बाहिर निस्किएकी थिई । मैले अर्को कप चिया मगाएँ र सोच्न थालेँ, ऊ को हो ? चिया आउँदा पनि थाहा पाउन सकिन, ऊ को हो ? त्यसपछि सोच्नै छाडिदिएँ ।नजिकैको टेबलमा एक नवविवाहित जोडी थिए । उनीहरू एकअर्कामा निकै सद्भाव र सत्कार प्रकट गर्दै थिए । उनीहरू नवविवाहित हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूको व्यवहारले नै बताइरहेको थियो । त्यसैगरी अर्को टेबलमा भने दुई जना वृद्धहरू गफिँदै थिए । तिनीहरूको गफमा समकालीन राजनीतिको चासो बढी थियो । चिया खाउन्जेलसम्म क्याफेमा नयाँ कुरा केही भएन । अब बस्नुको अर्थ थिएन, त्यसैले बिल तिरेर बाहिरिएँ ।न्युरोड, जमल हुँदै आफ्नो कोठा तिर लागेँ । गर्मी मौसम सुरु हुन लागेकोले मानिसहरू पातला कपडा किन्ने धाउन्नमा थिए । केही महिनाअघिसम्म पसलमा राखिएका ज्याकेट, स्विटर, टोपीजस्ता कपडा अहिले पसलहरूबाट गायब भएका थिए । मलाई ती हरेक दृश्यले भित्रभित्रै अनौठो प्रकारको आभास गराइरहेको हुन्थ्यो । लैनचौरबाट अगाडि बढ्दै गर्दा सोह्रखुट्टे बस्ने एकजना आत्मीय दाइलाई फोन गरेँ । उनी पनि चियाको निकै सौखिन थिए । त्यसैले पनि हाम्रो खाल सजिलै जमिहाल्थ्यो । हामी चियाको सुरमा क्याफेमा बसेर घण्टौंसम्म गफिन्थ्यौँ । हाम्रो गफ प्रायः जसो राजनीति, स्त्री, चलचित्र र सेक्समा केन्द्रित हुन्थ्यो ।‘हेलो दाइ कता हुनुहुन्छ ?’‘म अहिले बानेश्वरतिर छु, तँ कता छस् नि ?’‘दाइ, म सोह्रखुट्टेतिर आको थिए भेटुम् भनेर नि ।’‘म बेलुका घर फर्किएपछि कल गर्छु है, अहिले अलि बिजी छु ।' दाइले फोन राखिदिए ।म उदास मन लिएर कोठातिर लागेँ । समय बिताउने उचित कुरा केही थिएन । खाटमा पल्टिएँ । पल्टिएको केही बेरमै निदाउन पुगेछु । फोनको घन्टीले बिउँझिएँ । बिल्कुलै नयाँ नम्बरबाट आएको थियो फोन ।‘हेल्लो, को बोल्नुभएको ’ मैले प्रश्न गरेँ । उताबाट केही प्रतिक्रिया आएन ।मैले पुनः अघिकै प्रश्न दोहो¥याएँ । मलिन स्वरमा उताबाट नारी आवाज आयो, “हजुर विशालजी हो ?”‘हजुर म विशाल बोल्दै छु, हजुर को नि ?’‘आज दिउँसो बसन्तपुरको रेडबेल क्याफेमा भेटेको थियौँ नि । मलाई अलि हतार भएकाले बोल्नै पाइन ।’मेरो अलिकता भएको निद्रा भाँडियो र पूरै ध्यान उसमा केन्द्रित हुन पुग्यो ।म उसको कुराले अनौठो अवस्थामा पुगेँ । उसले राम्रैसँग चिनेजस्तो गरेर कुरा गरिरहेकी थिई । कुरैकुरामा भोलि केही समय फुर्सद भएकाले भेट्न सकिने कुरा गरी । भेट्ने ठाउँ पनि तय भयो, वसन्तपुरको त्यही चिया पसल, समय १० बजे । कुरा जतिसुकै लम्बिए पनि मैले उसको अनुहार र बोलीबाट उसलाई चिन्नै सकिन ।००००भोलिपल्ट उसको प्रस्ताव बमोजिम १० बजे म बसन्तपुरको रेडबेल क्याफे पुगेँ । ऊ भने आइपुगेकै थिइन । सायद ऊ आम केटीहरू जस्तै थिई । आफूहरू अरुलाई घन्टौँ कुराउँछन् अनि अरुले दुई मिनेट मात्रै कुरायो भनेचाहिँ खाम्ला झै गर्छन् ।क्याफेभित्र प्रवेश गरेर हट लेमन अर्डर दिएँ । हट लेमन पिउँदै क्याफेको भित्तामा कोरिएका चित्र हेर्दै थिएँ । चित्र निकै मोहक देखिन्थ्यो । कुनै महान् चित्रकारले कोरेको त्यो महान् चित्रमा एउटा डाँडाबाट झर्ना झरेको र त्यो झर्ना खोलामा परिणत भई एउटा सानो गाउँको नजिक हुँदै बगेको दृश्य थियो । खोलाको किनारमा केही महिलाहरू लुगा धुँदै थिए भने केही महिलाहरू सानो गाग्रीमा पानी बोकेर आफ्नो घरतिर लागिरहेका थिए । हेर्दा सामान्य भए पनि त्यो चित्र निकै सुन्दर र भव्य देखिन्थ्यो ।केही बेरपछि ऊ आइपुगी र सिधै म बसेको टेबलमा अगाडिपट्टिको खाली कुर्सीमा बसी ।हजुरलाई कुराएँ है । के गर्नु काठमाडौंको जाम नै यस्तै छ । समयमा कहिलै गन्तव्यमा पुगिँदैन ।मलाई कुराएकोमा ‘सरी’ त होइन तर सरीजस्तै स्पष्टीकरण दिई ।‘केही लिन्छौ’ भनेर मैले सोध्न नभ्याउँदै उसले ‘अहिले म केही लिन्न । लिने कुरा मैसँग छ ।’ उसले हाँस्दै ह्यान्ड ब्यागबाट सूर्य चुरोट निकालेर पिउन लागी । “माइन्ड नगर्नुहोला, के गर्नु नराम्रो बानी छ ।’ थोरै अप्ठ्यारो लवजमा ऊ लजाई ।म केही बोलिन । आखिर म पनि कहाँ नन स्मोकिङ् जोनमा बसेको थिएँ र ?‘हजुरले मलाई अझैसम्म पनि चिन्नु भएन जस्तो छ नि ?’ उसले चुरोट सल्काउँदै प्रश्न गरी । मैले केही उत्तर दिन सकिन ।‘नचिनेको मान्छेले जहाँ बोलायो उपस्थित भइदिने ? यस्तो त अलि भएन नि महाशय ।’ उसले अलि ठट्यौली पारामा भनी ।‘नचिनेको होइन, ठ्याक्कै याद नआएको मात्रै हो ।’ मैले हाँस्दै भनेँ ।‘मैले पनि हजुर पढेको स्कुलबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी हुँ । हजुर ग्रिन हाउसको क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो । म पनि हजुरकै हाउसमा थिएँ ।’ उसले चुरोटको धुवाँ लामो गरी बाहिर फ्याँक्दै भनी ।हलुका याद आएको हो कि जस्तो लाग्यो तर अझसम्म पनि ठ्म्याउनै सकिनँ ।‘नाम के भन्यौ ?’‘सन्ध्या हो । ये नाम तो सुना ही होगा ?’ उसको ठट्टा मलाई रमाइलो लाग्यो ।म गलल्ल हाँसेँ, ऊ पनि हाँसी ।‘सन्ध्या पौडेल । चिन्नु भो ?’‘अँ, बल्ल चिनेँ, यस्तो परिवर्तन भइसकेकी रहेछौ, कसरी चिन्नु त !’ मैले हाँस्दै भनेँ ।के गर्नु महाशय, सहरको हावाले छोएपछि सबै यस्तै हो ।अब मलाई अघिभन्दा केही सहज महसुस भयो । केहीबेर हामीबीच मौनता छायो । यो सन्नाटामा एउटा सुन्दर चेहेरा मेरो मस्तिष्कले ठ्याम्मै समायो । मैले उसलाई राम्रैसँग सम्झिएँ । ऊ हाम्रो विद्यालयकी सबैभन्दा शालीन र ज्ञानी विद्यार्थी मानिन्थी । हामी सिनियर भए पनि उसको चर्चा हाम्रो कक्षासम्म आइपुग्दथ्यो ।‘तिमी त निकै माथि पुग्छौ भन्ने हल्ला थियो, तिमी डाक्टर इन्जिनियर वा यस्तै समाजले उच्च मान्ने पेशामा हुनेछौ भन्ने चर्चा थियो ।’ मैले उसको नजिक कुर्सी सार्दै भनेँ, ‘के गर्दै छौ आजकल ?मेरो कुरा सुनेर उसले मुख अँध्यारो बनाई । अन्तिम चुरोटको कस तानेपछि उसले भने, ‘म के भएँ होला अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ ?’ मलाई उत्सुकता जाग्यो । मैले उसका कुरा सुनाउन अनुराध गरेँ ।‘मेरा ब्यथाहरू लामा छन र पीडादायी पनि । कहाँ हजुरहरूले आशा गरेको भविष्यको डाक्टर कहाँ अहिलेकी सन्ध्या ।’ उसले चुरोटलाई निर्ममतापूर्वक स्ट्रेमा किचिपिची पारी ।मैले पूरै वृत्तान्त हजुरलाई सुनाएपछि हजुरले मलाई घृणा गर्नु हुनेछ । मप्रतिको हजुरको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्छ । लौ मैले हजुरलाई मेरो वृत्तान्त सुनाएँ रे, के गर्नुहुन्छ ? मलाई के फाइदा हुन्छ ? केही त हुन सक्दैन ।” ऊ निकै उत्तेजित देखिई ।‘तिमीले सुनाएका वृत्तान्त म लेख्नेछु । त्यसले भविष्यमा केही राम्रो काम पक्कै गर्ला ।’ मैले भनेँ ।उसले कफी मगाई र कुरा सुरु गरी ।‘तपाईंलाई थाहा छ कि छैन, म त्यो बेला स्कुलमा पढ्न गाउँबाट तपाईंको सानो सहरमा पढ्न आएकी थिएँ । निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भए पनि बुबा मेरो पढाइ निकै माथि जाओस् र डाक्टरसम्म बनोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । यही कारण पढ्न सहर पठाउनु भएको थियो । पढाइ राम्रो भएकाले सबै शिक्षक र गाउँका पढेलेखेका मानिस बुबालाई मेरो बारेमा राम्रो कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो । यही कारण पनि उहाँले मप्रति धेरै भरोसा गर्नुभएको थियो । बहिनीको पढाइ राम्रो होस् भनेर उहाँले मसँगै काठमाडौं पठाउनुभएको थियो ।’कफी आउने बित्तिकै वेटरको हातबाटै खोजेजस्तो गरेर सुरुप्प पारी ।मेरो एसएलसी पनि राम्रै भयो । डिस्टिङ्सन पाएका कारण बुबाआमा औधी खुसी हुनुभयो । अझ भन्नुपर्दा बुबाको प्रतिष्ठा समाजमा अझै चुलियो । छोरीलाई राम्रो संस्कार दिएकोमा चोकचोकमा बुबाको प्रशंसा हुन थालेको थियो ।म साइन्स पढ्न काठमाडौं आएँ । काठमाडौं भन्नेबित्तिकै मेरो मनमा एउटा सभ्य सहरको परिकल्पना हुन्थ्यो तर त्यस्तो रहेनछ । मैले परिकल्पना गरेको भन्दा निकै भिन्न रहेछ यो सहर । म बिस्तारै यो सहरको रमझममा भुल्न थालेँ । मैले जानीनजानी सुस्तरी यही सहरको वेशभूषा अपनाएँ ।म सगरमाथा साइन्स कलेज, बालाजुमा भर्ना भएँ । त्यहाँ हामी केही बाहिरका थियौँ, अधिकांश साथीहरू काठमाडौंकै स्थानीय बासिन्दा थिए । तिनीहरूको जीवनशैली लोभलाग्दो देखिन्थ्यो । म तिनीहरूको जीवनशैली देखेर लोभिन थालेँ । तिनीहरूको जस्तै जिन्दगी जिउने रहर पलाउन थाल्यो । बिस्तारै मलाई यो सहर र यहाँको वेशभूषाले तान्न थाल्यो । आफू जन्मीहुर्केको ठाउँ तुच्छ लाग्न थाल्यो । मलाई मेरो जन्म ठाउँका घाँस, दाउरा, मेलापात तुच्छ लाग्न थाल्यो । अझ भन्नुपर्दा मलाई त्यो मेरो गाउँठाउँ भनौँ पुरापुर पश्चिम नेपाल तुच्छ लाग्न थाल्यो । जबजब म त्यो पश्चिमको बारेमा सोच्थेँ तबतब मनमा त्यसप्रति तीव्र घृणा पलाउन थाल्थ्यो । यो काठमाडौंभन्दा निकै पछाडि रहेको पश्चिम मेरो जन्मभूमि हो भन्ने कुराले मलाई हीनताबोध हुन थाल्यो । मलाई यो सहर, यो मान्छेको भीड, यो सहरका मान्छे र केवल यो सहरको जीवनशैली प्रिय लाग्न थाल्यो ।मेरा दिनहरू बिस्तारै समान्य बन्दै गइरहेका थिए । मेरो मन पनि सहरको विलासितामा मुग्ध हुँदै थियो । म पनि एउटा सहरिया युवतीजस्तै जीवन बिताउन लालायित हुन थालेँ । त्यसपछि म पनि आम सहरिया युवतीले जस्तै बार जान थालेँ । नाइट क्लबहरू जान थालेँ । आफ्नो औकात बिर्सिएर अन्तै मन डुलाउन थालेँ । कुर्ता सुरुवाल सबै त्यागेर वान पिस र छोटो स्कर्टमा सजिन थालेँ । कसैलाई आफ्नो परिचय दिँदा आफू पश्चिमेली चेली हुँ भन्न समेत लाज लाग्न थाल्यो । ममा एकाएक आएको आमूल परिवर्तनले गर्दा मलाई कसैले झट्टै चिन्न पनि सक्दैनथे । बा आमाले गरेका दुःख र कष्ट मैले मनन गर्न सकिन । चाहेर पनि उहाँहरूको परिश्रम मैले सम्झिन सकिन । बुबाको मलाई मेडिकल लाइन पढाउने सपना समेत मैले बिर्सिसकेको थिएँ । बुबाको त्यो च्यात्तिएको गोल्ड स्टार जुत्ता, त्यो पुरानो मैलो दौरा सुरुवाल, आमाको त्यो फुटेका कुर्कुच्चा, त्यो ठेला परेको हात, ती सबैकुरा बिर्सिसकेको थिएँ ।आमा दैनिकजसो फोन गरिरहनुहुन्थ्यो म भने सक्दो छोटो संवादमै कुरा टुङ्ग्याइदिन्थेँ । आमा सोच्नुहुन्थ्यो, छोरी पढाइमा व्यस्त छे तर यथार्थमा कुरा अर्कै थियो । आमासँग कुरा गर्दा मलाई निकै हीनताबोध हुने भएकाले उहाँसँग बोल्दा सकभर छोटो कुरा हुन्थ्यो ।त्यसताका मेरो दिनहरू मोजमस्तीमा बितिरहेका हुन्थे । लाग्थ्यो जिन्दगीको भरपुर मजा म लिइरहेकी छु । म दुध, दही र मोही खानेलाई ती सबै मन पर्न छोडिसकेको थियो । मेरो बियर, ह्विस्की र वाइनजस्ता कुराहरूप्रति मोह बढ्दो थियो । उस्तै उस्तै साथीहरूको संगतले मलाई ती कुराहरूमा लाग्न त्यत्ति गाह्रो भएन । सुरुसुरुमा त निकै औडाहा हुन्थ्यो तर बिस्तारै ती कुराहरूमा बानी पर्दै गयो ।मैले आफू एक दुर्गम गाउँकी युवती थिएँ भन्ने कुरा बिर्सिसकेकी थिएँ । मेरो वास्तविकता गाउँले र पश्चिम नेपाली परिवेशको भए पनि मबाट यी पहिचान सबै हराइसकेका थिए । म त्यस्तो समाजमा पुगेँ जहाँ सपना देख्न वञ्चित थियो । सपना देख्नु पाप सरह थियो । अझ आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बाहिरको सपना देख्नु त कहाली लाग्दो कष्टको सिकार हुनु जस्तै थियो । सपना देखेपछि त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सापना देख्नु अभिशाप थियो । सपनालाई पूरा गर्नसक्ने अवस्था कसैमा थिएन । त्यसैले मैले मेडिकल लाइन पढ्ने सपना साँच्न छोडिसकेको थिएँ । बिस्तारै म सामाजिक सञ्जालतिर छाउन थालेँ । गाउँकी एउटी सोझी केटी सहरको रमझममा फसेर छोटा कपडामा सजिन थालेँ । विभिन्न पोजमा अर्धनग्न तस्बिर लिन्थेँ । प्रायःजसो स्कर्ट, छोटो जिन्स र स्लिभलेसमा सजिएकी हुन्थँे । सजिएकी पनि के भन्नु, अड्काएकी हुन्थें । दुनियाँले मलाई कपडामा सजिँदा पनि नाङ्गो देखिरहेको हुँदो हो । गाउँमा हुँदा पुरै खुट्टा ढाकेर हिँड्ने म, सहरमा आफ्ना सेतो तिघ्रा देखाएर निर्धक्कसँग हिँड्ने सामथ्र्यमा जुटेको थिएँ । गाउँमा हुँदा घुँडाभन्दा माथिको कपडा लगाएको कहिलै थाहा छैन, तर यहाँ भने मेरा वस्त्र नै तिघ्रासम्म पुगेर टुङ्गिन्थे । मलाई सबैमाझ आकर्षित हुनु थियो त वस्त्र के चिज थियो ? आइपरेको खण्डमा म जे पनि गर्नसक्छु भन्ने मनोबल थियो, जुन केवल एउटा मूर्खताको मात रहेछ । बाटोमा हिँड्दै गर्दा उरन्ठेउला केटाहरू मेरो तिघ्राका निला नसातिर आँखा गाड्दै सिट्ठी फुक्ने र सुइसेला काढ्ने गर्थे । म भने निर्लज्ज भएर हिँड्थेँ । मैले लगाउने वस्त्रहरूबाट मेरा स्याउका दानाजस्ता स्तनका आकार स्पस्टसँग देखिन्थे । बाटोमा हिँड्दै गर्दा अधिकांशको नजर त्यहीँ पुग्थ्यो तर मलाई अलिकता पनि संकोच लाग्दैनथ्यो, उल्टै आफू आकर्षक भएँ भन्ने लाग्थ्यो । अहिले आएर म कति गलत रहेछु थाहा भएको छ, पश्चात्ताप भइरहेछ । मेरा ती दिनहरूका क्रियाकलाप सम्झँदा भित्रभित्रै आफैलाई ग्लानि हुन्छ । त्यतिबेला बैँसको मातमा म पूरा एकोहोरो भएकी थिएँ, हो म साँच्चिकै एकोहोरो भएकी थिएँ ।मैले अपनाएको कुबाटोबारे गाउँसम्म पनि खबर पुगिछाड्यो । सामान्य कुरालाई तोडमोड गरेर आकार दिने त्यो समाजले मेरो कुरालाई के सजिलै छोड्थ्यो ? मेरा कुराहरू निकै बढाइचढाइका साथ आमाबुबासम्म पनि पुग्यो । आफ्नो सन्तानको बारेमा त्यस्तो घिनलाग्दो खबर सुन्दा पत्यार लाग्ने कुरै भएन । तर पनि उहाँहरू पत्याउन विवश हुनुभयो । आफ्नो भविष्यको सहारा भनिएकी छोरीको त्यस्तो हालत सुन्दा बुबाआमामा के बित्यो होला ?बुबाले त त्यसै दिन फोन गरेर भन्नुभयो, ‘तैंले हाम्रो छोरी हुने हक गुमाइसकिस् । आजबाट तँ हाम्रो लागि मरेसरह हो ।’आमा भने बेला मौकामा फोन गरिरहनुहुन्छ र भक्कानिँदै भन्नुहुन्छ, ‘नानी, तेरो बुबालाई म सम्झाउँला, आफ्नो ख्याल राख्नू । गल्ती सबैबाट हुन्छ । गल्तीलाई सच्चयाएर अगाडि बढ्नाले नै जीवन सार्थक बन्न पुग्छ ।’आमाको त्यो वचन सुन्दा झन कहालीलाग्दो पीडाले मन भरिएर आउँथ्यो । सोच्दासोच्दै आत्महत्या गर्ने सोच नआएको पनि होइन तर सजिलै त्यतातिर कदम चाल्ने आँट आएन ।मैले अलिक ढिलै भए पनि आफ्नो गल्तीहरू मनन गरेँ । सबैकुरा त्यागेर म पुरानै जिन्दगीमा फर्किएँ । पढाइलाई निरन्तरता दिन थालेँ ।बेलाबेलामा पीडा अलि बढी भयो भने चुरोट पिउँछु र मनभित्रका पीडालाई धुवाँसरि हावामा उडाउँछु ।यति भनेर उसले फेरि आफ्नो ह्यान्ड ब्यागबाट चुरोटको बट्टा निकालेर एक खिल्ली चुरोट सल्काई र भनी, ‘बुबाको मनले मानेर मेरो एकचोटिको भुललाई माफ गर्दिनुभयो भने म यो चुरोटको लत पनि त्याग्न तयार छु ।’
२१ भाद्र २०७६, शनिबार १३:४८
पढाइ र होम सिकनेसले मन व्याकुल थियो । प्लस टु सकेका साथीहरू काठमाडौंमै भए पनि सम्पर्कभन्दा बाहिर । सम्पर्कमै भएकाहरू पनि आआफ्नो उद्देश्यमा लागिपरेका थिए । यस्तो लाग्यो, म मात्रै खाली छु । फुस्रो कपाल, कानमा सेतो इअरफोन, मुखमा मास्क र कालो लेदरको ज्याकेट लगाएर सोह्रखुट्टे हुँदै वसन्तपुरतिर लागेँ । ।
आकाशमा कालो बादल मडारिँदै पूरै उपत्यकालाई ढाकेको थियो । बाहिर निक्लने मान्छेहरू पानी पर्ने अनुमानका साथ छाता लिएर निक्लने गर्थे । मेलम्चीको पानी आउने कुरा भएकाले बाटोमा पाइप बिछ्याउने कामलाई तीव्रता दिइएको थियो । पानी नभएको सहरमा मानिस छाता बोकेर हिँड्नुपर्ने अनौठो दृश्य थियो । ती मानिस हतारमा थिए । एकअर्कालाई हेर्ने फुर्सद समेत थिएन ।
केही समयमै म वसन्तपुर पुगेँ र सधैं जाने गरेको बिगबेल नामक क्याफेमै गएँ । अरुबेला म आउँदा सधैं साथीहरू हुन्थे तर आज एक्लो थिएँ, नितान्त एक्लो । क्याफे खचाखच थियो । एउटा कुनाको टेबल रोज्न बाध्य भएँ । हुन पनि मलाई भीडभाड मन पर्न छोडिसकेको थियो । मलाई मानिसहरूको हुल तुच्छ लाग्थ्यो, क्षणिक लाग्थ्यो । सायद कसैसँग आशा गरेअनुरूप सम्बन्ध कायम नभएकोले होला ।
टेबलमा बसेको केही बेरमै सानो भाइ आएर सोध्न लाग्यो, “दाइ के लिनु हुन्छ ?”
मिल्क टी, मैले अर्डर दिएँ ।
मिल्क टी मात्र हो दाइ ?”
अँ भाइ, मिल्क टी मात्रै ल्याऊ अहिले । मैले मलिन आवाजमा उत्तर दिएँ ।
केही बेरमै चिया आइपुग्यो । म चिया पिउँदै मोबाइलमा फेसबुक चलाउँदै थिए । दुई तिहाइ सरकारले ल्याएका विधेयकहरू धमाधम विवादित भएका खबर फेसबुकमा पनि चर्चाको विषय रहेछन् । केही त विधेयक कुन चरीको नाम हो र त्यसले के गर्छ भन्ने थाहा नपाउने किशोरहरू पनि सरकारको विरोध गरिरहेका देखिन्थे ।
फेसबुककको रमाइलो के हो भने यहाँ राजनीति नबुझेकाहरूले पनि राजनीति गर्छन् ।
चुरोटको धुँवाको गन्धले नाकलाई सचेत बनाएपछि मैले मोबाइलबाट टाउको उठाएँ । छेउको टेबलमा एकजना युवती चुरोट पिउदै थिई ।
अवसादले ग्रसित, ऊ बुइँगलतिर हेरेर कफी पिइरहेकी थिई । गर्मी र कफि नजरी एकअर्कामा मिल्दैनन्, त्यस्तै उनको सौन्दर्यमा चुरोटसँगै पोखिएका पीडा मिल्ने देखिएन ।
ध्यान दिएर हेरेँ । कताकता देखे जस्तो लाग्थ्यो तर ठ्याक्कै याद आइरहेको थिएन । ऊ बारम्बार चुरोट मात्रै पिउँथी र आफ्नो पीडालाई चुरोटको धुवाँमार्फत लामो सासले बाहिर फ्याँक्थी ।
मैले कतै देखेको हुनुपर्छ तर कहाँ भनेर घोत्लिँदै थिएँ, उसको कुर्सी बज्यो । मैले उसतिर आँखा लगाएँ । कफी पिइसकेर उठ्ने तरखरमा कुर्सी बजेको रहेछ । म सतर्क भएँ । सायद उसलाई हेर्न नखोजेर बढी हेरिरहेको थिएँ । उसले चाल पाइहाली ।
बाहिर निक्लँदै गर्दा मेरो टेबलनजिकै आई र क्रस गर्नुअघि भनी, ‘हाई’
मैले थाहै नपाई मेरो मुखले भन्यो, ‘हेल्लो’ ।
‘हजुर पनि आउँनुहँुदो रहेछ त यता ।’
‘अँ, मलाई यहाँको चिया मन्न पर्छ ।’
यति कुरा गर्दा पनि मैले उसलाई चिन्न सकिरहेको थिइन ।
‘मलाई अलि हतार छ, जान्छु है’ भन्दै ऊ बाहिरतिर लागी ।
मलाई प्रसस्त फुर्सद थियो । र, यो फुर्सदमा सोच्ने सामग्री दिएर ऊ बाहिर निस्किएकी थिई । मैले अर्को कप चिया मगाएँ र सोच्न थालेँ, ऊ को हो ? चिया आउँदा पनि थाहा पाउन सकिन, ऊ को हो ? त्यसपछि सोच्नै छाडिदिएँ ।
नजिकैको टेबलमा एक नवविवाहित जोडी थिए । उनीहरू एकअर्कामा निकै सद्भाव र सत्कार प्रकट गर्दै थिए । उनीहरू नवविवाहित हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूको व्यवहारले नै बताइरहेको थियो । त्यसैगरी अर्को टेबलमा भने दुई जना वृद्धहरू गफिँदै थिए । तिनीहरूको गफमा समकालीन राजनीतिको चासो बढी थियो । चिया खाउन्जेलसम्म क्याफेमा नयाँ कुरा केही भएन । अब बस्नुको अर्थ थिएन, त्यसैले बिल तिरेर बाहिरिएँ ।
न्युरोड, जमल हुँदै आफ्नो कोठा तिर लागेँ । गर्मी मौसम सुरु हुन लागेकोले मानिसहरू पातला कपडा किन्ने धाउन्नमा थिए । केही महिनाअघिसम्म पसलमा राखिएका ज्याकेट, स्विटर, टोपीजस्ता कपडा अहिले पसलहरूबाट गायब भएका थिए । मलाई ती हरेक दृश्यले भित्रभित्रै अनौठो प्रकारको आभास गराइरहेको हुन्थ्यो । लैनचौरबाट अगाडि बढ्दै गर्दा सोह्रखुट्टे बस्ने एकजना आत्मीय दाइलाई फोन गरेँ । उनी पनि चियाको निकै सौखिन थिए । त्यसैले पनि हाम्रो खाल सजिलै जमिहाल्थ्यो । हामी चियाको सुरमा क्याफेमा बसेर घण्टौंसम्म गफिन्थ्यौँ । हाम्रो गफ प्रायः जसो राजनीति, स्त्री, चलचित्र र सेक्समा केन्द्रित हुन्थ्यो ।
‘हेलो दाइ कता हुनुहुन्छ ?’
‘म अहिले बानेश्वरतिर छु, तँ कता छस् नि ?’
‘दाइ, म सोह्रखुट्टेतिर आको थिए भेटुम् भनेर नि ।’
‘म बेलुका घर फर्किएपछि कल गर्छु है, अहिले अलि बिजी छु ।’ दाइले फोन राखिदिए ।
म उदास मन लिएर कोठातिर लागेँ । समय बिताउने उचित कुरा केही थिएन । खाटमा पल्टिएँ । पल्टिएको केही बेरमै निदाउन पुगेछु ।
फोनको घन्टीले बिउँझिएँ । बिल्कुलै नयाँ नम्बरबाट आएको थियो फोन ।
‘हेल्लो, को बोल्नुभएको ’ मैले प्रश्न गरेँ । उताबाट केही प्रतिक्रिया आएन ।
मैले पुनः अघिकै प्रश्न दोहो¥याएँ । मलिन स्वरमा उताबाट नारी आवाज आयो, “हजुर विशालजी हो ?”
‘हजुर म विशाल बोल्दै छु, हजुर को नि ?’
‘आज दिउँसो बसन्तपुरको रेडबेल क्याफेमा भेटेको थियौँ नि । मलाई अलि हतार भएकाले बोल्नै पाइन ।’
मेरो अलिकता भएको निद्रा भाँडियो र पूरै ध्यान उसमा केन्द्रित हुन पुग्यो ।
म उसको कुराले अनौठो अवस्थामा पुगेँ । उसले राम्रैसँग चिनेजस्तो गरेर कुरा गरिरहेकी थिई । कुरैकुरामा भोलि केही समय फुर्सद भएकाले भेट्न सकिने कुरा गरी । भेट्ने ठाउँ पनि तय भयो, वसन्तपुरको त्यही चिया पसल, समय १० बजे । कुरा जतिसुकै लम्बिए पनि मैले उसको अनुहार र बोलीबाट उसलाई चिन्नै सकिन ।
भोलिपल्ट उसको प्रस्ताव बमोजिम १० बजे म बसन्तपुरको रेडबेल क्याफे पुगेँ । ऊ भने आइपुगेकै थिइन । सायद ऊ आम केटीहरू जस्तै थिई । आफूहरू अरुलाई घन्टौँ कुराउँछन् अनि अरुले दुई मिनेट मात्रै कुरायो भनेचाहिँ खाम्ला झै गर्छन् ।
क्याफेभित्र प्रवेश गरेर हट लेमन अर्डर दिएँ । हट लेमन पिउँदै क्याफेको भित्तामा कोरिएका चित्र हेर्दै थिएँ । चित्र निकै मोहक देखिन्थ्यो । कुनै महान् चित्रकारले कोरेको त्यो महान् चित्रमा एउटा डाँडाबाट झर्ना झरेको र त्यो झर्ना खोलामा परिणत भई एउटा सानो गाउँको नजिक हुँदै बगेको दृश्य थियो । खोलाको किनारमा केही महिलाहरू लुगा धुँदै थिए भने केही महिलाहरू सानो गाग्रीमा पानी बोकेर आफ्नो घरतिर लागिरहेका थिए । हेर्दा सामान्य भए पनि त्यो चित्र निकै सुन्दर र भव्य देखिन्थ्यो ।
केही बेरपछि ऊ आइपुगी र सिधै म बसेको टेबलमा अगाडिपट्टिको खाली कुर्सीमा बसी ।
हजुरलाई कुराएँ है । के गर्नु काठमाडौंको जाम नै यस्तै छ । समयमा कहिलै गन्तव्यमा पुगिँदैन ।
मलाई कुराएकोमा ‘सरी’ त होइन तर सरीजस्तै स्पष्टीकरण दिई ।
‘केही लिन्छौ’ भनेर मैले सोध्न नभ्याउँदै उसले ‘अहिले म केही लिन्न । लिने कुरा मैसँग छ ।’ उसले हाँस्दै ह्यान्ड ब्यागबाट सूर्य चुरोट निकालेर पिउन लागी । “माइन्ड नगर्नुहोला, के गर्नु नराम्रो बानी छ ।’ थोरै अप्ठ्यारो लवजमा ऊ लजाई ।
म केही बोलिन । आखिर म पनि कहाँ नन स्मोकिङ् जोनमा बसेको थिएँ र ?
‘हजुरले मलाई अझैसम्म पनि चिन्नु भएन जस्तो छ नि ?’ उसले चुरोट सल्काउँदै प्रश्न गरी ।
मैले केही उत्तर दिन सकिन ।
‘नचिनेको मान्छेले जहाँ बोलायो उपस्थित भइदिने ? यस्तो त अलि भएन नि महाशय ।’ उसले अलि ठट्यौली पारामा भनी ।
‘नचिनेको होइन, ठ्याक्कै याद नआएको मात्रै हो ।’ मैले हाँस्दै भनेँ ।
‘मैले पनि हजुर पढेको स्कुलबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी हुँ । हजुर ग्रिन हाउसको क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो । म पनि हजुरकै हाउसमा थिएँ ।’ उसले चुरोटको धुवाँ लामो गरी बाहिर फ्याँक्दै भनी ।
हलुका याद आएको हो कि जस्तो लाग्यो तर अझसम्म पनि ठ्म्याउनै सकिनँ ।
‘नाम के भन्यौ ?’
‘सन्ध्या हो । ये नाम तो सुना ही होगा ?’ उसको ठट्टा मलाई रमाइलो लाग्यो ।
म गलल्ल हाँसेँ, ऊ पनि हाँसी ।
‘सन्ध्या पौडेल । चिन्नु भो ?’
‘अँ, बल्ल चिनेँ, यस्तो परिवर्तन भइसकेकी रहेछौ, कसरी चिन्नु त !’ मैले हाँस्दै भनेँ ।
के गर्नु महाशय, सहरको हावाले छोएपछि सबै यस्तै हो ।
अब मलाई अघिभन्दा केही सहज महसुस भयो । केहीबेर हामीबीच मौनता छायो । यो सन्नाटामा एउटा सुन्दर चेहेरा मेरो मस्तिष्कले ठ्याम्मै समायो । मैले उसलाई राम्रैसँग सम्झिएँ । ऊ हाम्रो विद्यालयकी सबैभन्दा शालीन र ज्ञानी विद्यार्थी मानिन्थी । हामी सिनियर भए पनि उसको चर्चा हाम्रो कक्षासम्म आइपुग्दथ्यो ।
‘तिमी त निकै माथि पुग्छौ भन्ने हल्ला थियो, तिमी डाक्टर इन्जिनियर वा यस्तै समाजले उच्च मान्ने पेशामा हुनेछौ भन्ने चर्चा थियो ।’ मैले उसको नजिक कुर्सी सार्दै भनेँ, ‘के गर्दै छौ आजकल ?
मेरो कुरा सुनेर उसले मुख अँध्यारो बनाई । अन्तिम चुरोटको कस तानेपछि उसले भने, ‘म के भएँ होला अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ ?’
मलाई उत्सुकता जाग्यो । मैले उसका कुरा सुनाउन अनुराध गरेँ ।
‘मेरा ब्यथाहरू लामा छन र पीडादायी पनि । कहाँ हजुरहरूले आशा गरेको भविष्यको डाक्टर कहाँ अहिलेकी सन्ध्या ।’
उसले चुरोटलाई निर्ममतापूर्वक स्ट्रेमा किचिपिची पारी ।
मैले पूरै वृत्तान्त हजुरलाई सुनाएपछि हजुरले मलाई घृणा गर्नु हुनेछ । मप्रतिको हजुरको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्छ । लौ मैले हजुरलाई मेरो वृत्तान्त सुनाएँ रे, के गर्नुहुन्छ ? मलाई के फाइदा हुन्छ ? केही त हुन सक्दैन ।” ऊ निकै उत्तेजित देखिई ।
‘तिमीले सुनाएका वृत्तान्त म लेख्नेछु । त्यसले भविष्यमा केही राम्रो काम पक्कै गर्ला ।’ मैले भनेँ ।
उसले कफी मगाई र कुरा सुरु गरी ।
‘तपाईंलाई थाहा छ कि छैन, म त्यो बेला स्कुलमा पढ्न गाउँबाट तपाईंको सानो सहरमा पढ्न आएकी थिएँ । निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भए पनि बुबा मेरो पढाइ निकै माथि जाओस् र डाक्टरसम्म बनोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । यही कारण पढ्न सहर पठाउनु भएको थियो । पढाइ राम्रो भएकाले सबै शिक्षक र गाउँका पढेलेखेका मानिस बुबालाई मेरो बारेमा राम्रो कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो । यही कारण पनि उहाँले मप्रति धेरै भरोसा गर्नुभएको थियो । बहिनीको पढाइ राम्रो होस् भनेर उहाँले मसँगै काठमाडौं पठाउनुभएको थियो ।’
कफी आउने बित्तिकै वेटरको हातबाटै खोजेजस्तो गरेर सुरुप्प पारी ।
मेरो एसएलसी पनि राम्रै भयो । डिस्टिङ्सन पाएका कारण बुबाआमा औधी खुसी हुनुभयो । अझ भन्नुपर्दा बुबाको प्रतिष्ठा समाजमा अझै चुलियो । छोरीलाई राम्रो संस्कार दिएकोमा चोकचोकमा बुबाको प्रशंसा हुन थालेको थियो ।
म साइन्स पढ्न काठमाडौं आएँ । काठमाडौं भन्नेबित्तिकै मेरो मनमा एउटा सभ्य सहरको परिकल्पना हुन्थ्यो तर त्यस्तो रहेनछ । मैले परिकल्पना गरेको भन्दा निकै भिन्न रहेछ यो सहर । म बिस्तारै यो सहरको रमझममा भुल्न थालेँ । मैले जानीनजानी सुस्तरी यही सहरको वेशभूषा अपनाएँ ।
म सगरमाथा साइन्स कलेज, बालाजुमा भर्ना भएँ । त्यहाँ हामी केही बाहिरका थियौँ, अधिकांश साथीहरू काठमाडौंकै स्थानीय बासिन्दा थिए । तिनीहरूको जीवनशैली लोभलाग्दो देखिन्थ्यो । म तिनीहरूको जीवनशैली देखेर लोभिन थालेँ । तिनीहरूको जस्तै जिन्दगी जिउने रहर पलाउन थाल्यो । बिस्तारै मलाई यो सहर र यहाँको वेशभूषाले तान्न थाल्यो । आफू जन्मीहुर्केको ठाउँ तुच्छ लाग्न थाल्यो । मलाई मेरो जन्म ठाउँका घाँस, दाउरा, मेलापात तुच्छ लाग्न थाल्यो । अझ भन्नुपर्दा मलाई त्यो मेरो गाउँठाउँ भनौँ पुरापुर पश्चिम नेपाल तुच्छ लाग्न थाल्यो । जबजब म त्यो पश्चिमको बारेमा सोच्थेँ तबतब मनमा त्यसप्रति तीव्र घृणा पलाउन थाल्थ्यो । यो काठमाडौंभन्दा निकै पछाडि रहेको पश्चिम मेरो जन्मभूमि हो भन्ने कुराले मलाई हीनताबोध हुन थाल्यो । मलाई यो सहर, यो मान्छेको भीड, यो सहरका मान्छे र केवल यो सहरको जीवनशैली प्रिय लाग्न थाल्यो ।
मेरा दिनहरू बिस्तारै समान्य बन्दै गइरहेका थिए । मेरो मन पनि सहरको विलासितामा मुग्ध हुँदै थियो । म पनि एउटा सहरिया युवतीजस्तै जीवन बिताउन लालायित हुन थालेँ । त्यसपछि म पनि आम सहरिया युवतीले जस्तै बार जान थालेँ । नाइट क्लबहरू जान थालेँ । आफ्नो औकात बिर्सिएर अन्तै मन डुलाउन थालेँ । कुर्ता सुरुवाल सबै त्यागेर वान पिस र छोटो स्कर्टमा सजिन थालेँ । कसैलाई आफ्नो परिचय दिँदा आफू पश्चिमेली चेली हुँ भन्न समेत लाज लाग्न थाल्यो । ममा एकाएक आएको आमूल परिवर्तनले गर्दा मलाई कसैले झट्टै चिन्न पनि सक्दैनथे ।
बा आमाले गरेका दुःख र कष्ट मैले मनन गर्न सकिन । चाहेर पनि उहाँहरूको परिश्रम मैले सम्झिन सकिन । बुबाको मलाई मेडिकल लाइन पढाउने सपना समेत मैले बिर्सिसकेको थिएँ । बुबाको त्यो च्यात्तिएको गोल्ड स्टार जुत्ता, त्यो पुरानो मैलो दौरा सुरुवाल, आमाको त्यो फुटेका कुर्कुच्चा, त्यो ठेला परेको हात, ती सबैकुरा बिर्सिसकेको थिएँ ।
आमा दैनिकजसो फोन गरिरहनुहुन्थ्यो म भने सक्दो छोटो संवादमै कुरा टुङ्ग्याइदिन्थेँ । आमा सोच्नुहुन्थ्यो, छोरी पढाइमा व्यस्त छे तर यथार्थमा कुरा अर्कै थियो । आमासँग कुरा गर्दा मलाई निकै हीनताबोध हुने भएकाले उहाँसँग बोल्दा सकभर छोटो कुरा हुन्थ्यो ।
त्यसताका मेरो दिनहरू मोजमस्तीमा बितिरहेका हुन्थे । लाग्थ्यो जिन्दगीको भरपुर मजा म लिइरहेकी छु । म दुध, दही र मोही खानेलाई ती सबै मन पर्न छोडिसकेको थियो । मेरो बियर, ह्विस्की र वाइनजस्ता कुराहरूप्रति मोह बढ्दो थियो । उस्तै उस्तै साथीहरूको संगतले मलाई ती कुराहरूमा लाग्न त्यत्ति गाह्रो भएन । सुरुसुरुमा त निकै औडाहा हुन्थ्यो तर बिस्तारै ती कुराहरूमा बानी पर्दै गयो ।
मैले आफू एक दुर्गम गाउँकी युवती थिएँ भन्ने कुरा बिर्सिसकेकी थिएँ । मेरो वास्तविकता गाउँले र पश्चिम नेपाली परिवेशको भए पनि मबाट यी पहिचान सबै हराइसकेका थिए । म त्यस्तो समाजमा पुगेँ जहाँ सपना देख्न वञ्चित थियो । सपना देख्नु पाप सरह थियो । अझ आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बाहिरको सपना देख्नु त कहाली लाग्दो कष्टको सिकार हुनु जस्तै थियो । सपना देखेपछि त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सापना देख्नु अभिशाप थियो । सपनालाई पूरा गर्नसक्ने अवस्था कसैमा थिएन । त्यसैले मैले मेडिकल लाइन पढ्ने सपना साँच्न छोडिसकेको थिएँ ।
बिस्तारै म सामाजिक सञ्जालतिर छाउन थालेँ । गाउँकी एउटी सोझी केटी सहरको रमझममा फसेर छोटा कपडामा सजिन थालेँ । विभिन्न पोजमा अर्धनग्न तस्बिर लिन्थेँ । प्रायःजसो स्कर्ट, छोटो जिन्स र स्लिभलेसमा सजिएकी हुन्थँे । सजिएकी पनि के भन्नु, अड्काएकी हुन्थें । दुनियाँले मलाई कपडामा सजिँदा पनि नाङ्गो देखिरहेको हुँदो हो । गाउँमा हुँदा पुरै खुट्टा ढाकेर हिँड्ने म, सहरमा आफ्ना सेतो तिघ्रा देखाएर निर्धक्कसँग हिँड्ने सामथ्र्यमा जुटेको थिएँ । गाउँमा हुँदा घुँडाभन्दा माथिको कपडा लगाएको कहिलै थाहा छैन, तर यहाँ भने मेरा वस्त्र नै तिघ्रासम्म पुगेर टुङ्गिन्थे । मलाई सबैमाझ आकर्षित हुनु थियो त वस्त्र के चिज थियो ? आइपरेको खण्डमा म जे पनि गर्नसक्छु भन्ने मनोबल थियो, जुन केवल एउटा मूर्खताको मात रहेछ । बाटोमा हिँड्दै गर्दा उरन्ठेउला केटाहरू मेरो तिघ्राका निला नसातिर आँखा गाड्दै सिट्ठी फुक्ने र सुइसेला काढ्ने गर्थे । म भने निर्लज्ज भएर हिँड्थेँ । मैले लगाउने वस्त्रहरूबाट मेरा स्याउका दानाजस्ता स्तनका आकार स्पस्टसँग देखिन्थे । बाटोमा हिँड्दै गर्दा अधिकांशको नजर त्यहीँ पुग्थ्यो तर मलाई अलिकता पनि संकोच लाग्दैनथ्यो, उल्टै आफू आकर्षक भएँ भन्ने लाग्थ्यो ।
अहिले आएर म कति गलत रहेछु थाहा भएको छ, पश्चात्ताप भइरहेछ । मेरा ती दिनहरूका क्रियाकलाप सम्झँदा भित्रभित्रै आफैलाई ग्लानि हुन्छ । त्यतिबेला बैँसको मातमा म पूरा एकोहोरो भएकी थिएँ, हो म साँच्चिकै एकोहोरो भएकी थिएँ ।
मैले अपनाएको कुबाटोबारे गाउँसम्म पनि खबर पुगिछाड्यो । सामान्य कुरालाई तोडमोड गरेर आकार दिने त्यो समाजले मेरो कुरालाई के सजिलै छोड्थ्यो ? मेरा कुराहरू निकै बढाइचढाइका साथ आमाबुबासम्म पनि पुग्यो । आफ्नो सन्तानको बारेमा त्यस्तो घिनलाग्दो खबर सुन्दा पत्यार लाग्ने कुरै भएन । तर पनि उहाँहरू पत्याउन विवश हुनुभयो । आफ्नो भविष्यको सहारा भनिएकी छोरीको त्यस्तो हालत सुन्दा बुबाआमामा के बित्यो होला ?
बुबाले त त्यसै दिन फोन गरेर भन्नुभयो, ‘तैंले हाम्रो छोरी हुने हक गुमाइसकिस् । आजबाट तँ हाम्रो लागि मरेसरह हो ।’
आमा भने बेला मौकामा फोन गरिरहनुहुन्छ र भक्कानिँदै भन्नुहुन्छ, ‘नानी, तेरो बुबालाई म सम्झाउँला, आफ्नो ख्याल राख्नू । गल्ती सबैबाट हुन्छ । गल्तीलाई सच्चयाएर अगाडि बढ्नाले नै जीवन सार्थक बन्न पुग्छ ।’
आमाको त्यो वचन सुन्दा झन कहालीलाग्दो पीडाले मन भरिएर आउँथ्यो । सोच्दासोच्दै आत्महत्या गर्ने सोच नआएको पनि होइन तर सजिलै त्यतातिर कदम चाल्ने आँट आएन ।
मैले अलिक ढिलै भए पनि आफ्नो गल्तीहरू मनन गरेँ । सबैकुरा त्यागेर म पुरानै जिन्दगीमा फर्किएँ । पढाइलाई निरन्तरता दिन थालेँ ।
बेलाबेलामा पीडा अलि बढी भयो भने चुरोट पिउँछु र मनभित्रका पीडालाई धुवाँसरि हावामा उडाउँछु ।
यति भनेर उसले फेरि आफ्नो ह्यान्ड ब्यागबाट चुरोटको बट्टा निकालेर एक खिल्ली चुरोट सल्काई र भनी, ‘बुबाको मनले मानेर मेरो एकचोटिको भुललाई माफ गर्दिनुभयो भने म यो चुरोटको लत पनि त्याग्न तयार छु ।’
तैंले हाम्रो छोरी हुने हक गुमाइसकिस्, वसन्तपुर, विशालदत्त भट्ट
Prevपर्यटनमन्त्री भट्टराईद्वारा जम्नदिनको अवसरमा बालकलाई सहयोग
नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न दिन्नौं- प्रचण्डNext